बढ्ला यु'रिक ए'सिड, याद गर्नु पर्ने कुराहरु - HPsanchar.com
बढ्ला यु’रिक ए’सिड, याद गर्नु पर्ने कुराहरु
October 28, 2020 biplov adhikari खानपान 0
जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई । यु’रिक ए’सिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रो’ग लाग्छ । यु’रिक ए’सिडलाई एक प्रकारको बाथरो’गका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यु’रिक ए’सिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो । यद्यपी सामान्य दिनमा पनि यस्तै समस्या बल्झिरहन्छ भने शकां गर्नुपर्छ, यु’रिक ए’सिडको । बेलाबखत हाड जोर्नी दुख्नु सामान्य हो । बढी शारीरिक श्रम गरेको बेला पनि यस्तो समस्या हुन्छ । तर, सामान्य अवस्थामा हाड जोर्नी दुख्ने समस्या ज्यूँको त्यूँ रहन्छ भने यसको उचित उ पचा र खोज्नैपर्छ ।
किन हुन्छ यु’रिक ए’सिड ? शरीरभित्र पिउरिन भन्ने प्रोटिन टुक्रिएर यु’रिक ए’सिड उत्पादन हुन्छ । सामान्यतः ३ देखि ७ मिलिग्राम/डेसिलिटरसम्मको यु’रिक ए’सिड नर्मल मानिन्छ । जब यु’रिक ए’सिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई यु’रिक ए’सिड बढेको भनिन्छ । यसरी यु’रिक ए’सिड बढेपछि सामान्यतः खुट्टाको बुढीऔँलाको छेउमा अचानक दुख्ने तथा सुन्निने अवस्था आउँछ । राति सुत्ने वेलामा सामान्य रहेको मानिस बिहान उठ्दा नाटकीय रूपमा दुख्ने र सुन्निने भई खुट्टा टेक्न गाह्रो हुन्छ । यसका साथै यु’रिक ए’सिड लागेमा कुर्कुच्चा, घुँडा, औँला र कुहिनो अकस्मात् दुख्ने गर्छ । यस्तो समस्या जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि लाग्न सक्छ ।
शरीरभित्रको यु’रिक ए’सिड पगाल्ने इन्जायमको कमीका कारण संक्रमण भई ७० प्रतिशतलाई यस्तो समस्या हुने गर्छ । कतिपयमा खानामा प्रोटिन बढी भएर वा वंशाणुगत कारणले पनि लाग्ने गर्छ । यु’रिक ए’सिडको लक्षण देखिएमा रगतमा यु’रिक ए’सिडको मात्रा परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । यद्यपि, लक्षणबारे थाहा नभएमा नियमित रगत जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ । दुखेको अवस्थामा सुन्निने समस्या भएमा जथाभावी रूपमा पेनकिलर प्रयोग गर्नुहुँदैन । यस्ता औषधिको प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा चिकित्सकको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ । यस्ता औषधि सामान्यतया सातदेखि १० दिनसम्म प्रयोग गर्दा हुन्छ । यु’रिक ए’सिडको मात्रा अत्यधिक बढी भएमा, यु’रिक ए’सिडका कणहरू मासु तथा जोर्नीमा जम्मा भएको अवस्थामा यस्तो समस्या घटाउन चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ । सामान्यतया यस्तो औषधि ३ देखि ६ महिनासम्म सेवन गर्नुपर्छ । यु’रिक ए’सिडबाट ग्रसित व्यक्तिले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । किनकि, पानीले यु’रिक ए’सिडलाई पिसाबका माध्यमबाट हटाउने काम गर्छ ।
कसरी हुन्छ ? यो समस्या ३० वर्षको उमेर पार गरेका व्यक्तिहरुलाई धेरै हुने गर्छ । जब कुनै कारणवस मिर्गौ’लाले रगतमा भएका विभिन्न रसायनलाई राम्ररी छान्न सक्दैन, तब रगतमा रहेको युरिया यु’रिक ए’सिडमा परिवर्तित हुन्छ । सामान्यतया यु’रिक ए’सिड शरीरको कोशिका तथा हामीले खानेकुराबाट बन्छ । त्यसमध्येको धेरैजसो ए’सिडलाई मिगौलाले छानेर पिसाबद्वारा शरीरबाट बाहिर फाल्ने गर्छ । तर कुनै कारणवस मिर्गौ’लाले उक्त ए’सिडलाई छान्न नसके यसले रगतमा यु’रिक ए’सिडको स्तरलाई बढाउने गर्छ । जसका कारण यु’रिक ए’सिडको समस्या निम्तिने गर्छ । एक स्वस्थ महिलाको शरीरमा यु’रिक ए’सिडकोस्तर २.४-६.० मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर भएमा यसलाई सामान्य मानिन्छ । त्यस्तै, पुरुषमा यु’रिक ए’सिडको स्तर ३.४ देखि ७.० मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर भएमा त्यसलाई सामान्य भनिन्छ । शरीरमा यु’रिक ए’सिडको मात्रा बढेमा मांसपेशी सुन्निनुका साथै जोर्नी दुख्ने, औला सुन्निे गर्छ । समयमै यसको लक्षण थाहा पाएर पनि यो रो’गलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
के हो यु’रिक ए’सिड ? यु’रिक ए’सिड कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन तथा नाइट्रोजन जस्ता तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । यो शरीरमा रहेको प्रोटिनबाट एमिनो ए’सिडको रुपमा प्राप्त हुन्छ, यसको मात्रा पिसाबद्धारा शरीरबाट बाहिरिने गर्छ । तर जब शरीरमा यसको मात्रा बढ्छ, तब यो शरीरभित्र जम्मा हुनथाल्छ र हड्डीमा क्षति पुर्‍याउने गर्छ । यु’रिक ए’सिड भएमा आर्थराइटिस हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यु’रिक ए’सिडको मात्रा बढ्ने कारण थुप्रै कारणले शरीरमा यु’रिक ए’सिडको स्तर बढ्ने गर्न सक्छ । त्यस मध्ये वंशानुगत कारण देखि उच्च रक्तचाप, मोटोपन, अनियन्त्रित खानपान, र’क्सीको सेवन, पिसाब बढी लगाउने औषधिको प्रयोग जस्ता थुप्रै कारणले असर पर्न सक्दछ । म’दिराको सेवन प्राय धेरैले गर्ने र ती व्यक्तिहरुमा उच्च रक्तचाप, मोटोपन, पिसाब गराउने औषधिको सेवन गर्नु पर्ने बाध्यता जस्ता विभिन्न समस्या एकैपल्ट देखा पर्नसक्ने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुले उच्च सतर्कता नअपनाएका खण्डमा यु’रिक ए’सिडको स्तर बढेर त्यसबाट हुनसक्ने स्वा’स्थ्यका लागि सबै नकारात्मक प्रभाव ब्यहोर्नु पर्ने अनिवार्य हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले शरीरमा यूरिक ए’सिडको मात्रा बढी हुनुका कारण फरक–फरक देखाएका छन् । पहिलो हो यु’रिक ए’सिड सामान्य भन्दा बढी शरीरमा उत्पादन हुनु । दोस्रो, मिर्गौ’लाबाट पिसाब भएर शरीरबाट निस्कनु पर्ने मात्रामा कमी हुनु र फलस्वरुप रगतमा यु’रिक ए’सिडको स्तर उच्च हुनु । तेस्रो, मिश्रित कारण भनेको भोजनमा यु’रिक ए’सिड बन्ने कुरोको औधी सेवन गर्नु, र’क्सीको सेवन धेरै गर्नु, लामो समयसम्म भोको बस्नु हो ।
कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ यो समस्या ? शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने व्यक्तिलाई यु’रिक ए’सिडको सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यस्तै, खानामा प्रोटिनको कमी भएमा पनि यु’रिक ए’सिडको समस्या निम्तिन सक्छ ।यसको जोखिम कम गर्न समयमा खाने तथा सन्तुलित आहार खानु पर्छ । लक्षण खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरु सुन्निनु । जोर्नी राति बढी दुख्नु । दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु । लामो सयम यु’रिक ए’सिडको समस्या भएकालाई घुँडा, कुइनो लगायतका जोर्नीहरुमा पनि दुख्नु । ज्वरो आउनु, आदि । किन हुन्छ समस्या ? तनाव, अत्याधिक मात्रामा म’दिराको सेवन, लामो समयसम्म भोकै रहने, व्यायामको कमी, शरीरमा पानीको कमीले पनि यो समस्या निम्तिने गर्छ । त्यस्तै, रेड मिट, सी फूड, गेडागुडीको सेवन तथा विशेष प्रकारका केही औ षधीको सेवनले पनि यु’रिक ए’सिडको समस्या निम्तिने गर्छ । त्यसैले, खानामा के खाने, के नखाने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । खानामा विशेष सजगता अपनाएर पनि यु’रिक ए’सिडको समस्या हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
घरेलु विधी करिब एक किलो तौलको काँचो मेवालाई राम्ररी पखालौ । अब त्यसलाई बोक्रासमेत सानो सानो टुक्रामा विभाजित गरौ । अब यसलाई एउटा भाडोमा हालेर त्यसमा तीन किलो पानी मिसाएर त्यसमा पाच प्याकेट ग्रीन टी मिसाएर करिब १५ मिनेट चिया झै उमालौ र छानौ । अब अन्दाजी ५ , ६ गिलास सहितको यो औ षधी तयार भयो । यसलाई १४ दिनसम्म लगातार पिएको खण्डमा तपाईको शरीरमा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखिन सक्छ । त्यतिमात्र हैन, १४ दिन पश्चात्त जब तपाईको रिपोर्ट सामान्य आउँछ, त्यसपछि सातामा एक दिन यसको सेवनले यु’रिक ए’सिडको समस्या हटेर जान्छ ।
यस्ता छन्, यु’रिक ए’सिड बढेकाले खान हुने र खान नहुने खानेकुराहरु क) खान नहुने माछाहरु, प्राउन, लोवस्टर । जाँड, र’क्सी । रातो मासु (खसी, राँगो), भित्री मासु (कलेजो, मुटु, मिर्गौ’ला, गिदी) । ख) प्रशस्त मात्रामा खान हुने फलफूलहरु । गाजर, काक्रो । चामल, गहुँ, मकै, आलु, पाउरोटी, चिनी । हरियो सागपात (सिमी, बोडी बाहेक) ग) कम मात्रामा खान हुने दाल तथा गेडागुडीहरु । कुरिलो, काउली, पालुङ्गो, गोलभेडा, च्याउ । अण्डा । काजु, ओखर, पेस्ता, बदाम । दूध र दूधबाट बनेका परिकारहरु । सेतो मासु (कुखुरा, हाँस तथा अन्य चराचुरुङ्गीहरुको मासु)
कसरी बच्ने ? खाना पकाउँदा वटर वा भेजिटेबल आयलको सट्टा ओलिभ -जैतुन)को तेल प्रयोग गरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किनकी जैतुनको तेलको प्रयोगले शरीरमा अतिरिक्त यु’रिक ए’सिड जम्मा हुँदैन । यो मुटुको लागि पनि लाभदायक मानिन्छ । शरीरमा यु’रिक ए’सिडको मात्रालाई कम गनए दिनमा कम्तीमा पाँच सय ग्राम भिटामिन ‘सी’को सेवन गरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । नियमित रुपमा भिटामिन ‘सी’को सेवनले एक, दुई महिनामै यूरिक ए’सिडको स्तर कम हुन थाल्छ । आर्थराइटिस र युुरिक ए’सिडको समस्या ज्वानोको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । ज्वानोमा एन्टीअक्सिडेन्ट तथा डाईयुरेटिक गुण हुन्छ, जसले दुखाई कम गन मद्दत गर्छ । यसमा एन्टीसेप्टीक गुण पनि हुने भएकोले यो समस्यामा ज्वानोको प्रयोग द्धारा प्राकृतिक उ पचा र गरिन्छ ।
रातो मिला मिर्च, खुर्सानी, टमाटर, व्लुबेरी, ब्रोकाउली तथा अंगुर आदीमा एन्टीअक्सिडेन्ट भिटामिन भरपूर मात्रामा हुन्छ । एन्टीअक्सिडेन्ट भिटामिनले पि|m रेडिकल्सलाई शरीरमा हमला गर्नबाट रोक्छ । जसले गर्दा शरीरमा यु’रिक ए’सिडको स्तर कम हुन पुग्छ । स्याउको रसले रगतको पीएच लेभललाई बढाएर यु’रिक ए’सिडको स्तरलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । तर त्यसको लागि प्रयोग गरिने स्याउको रस काचै र पानी नमिसाएकै हुनु पर्छ । शरीरमा यु’रिक ए’सिडको मात्रा उच्च भएमा बेकरी प्रोडक्ट तथा स्याचुरेटेडेड फ्याटले यसलाई झनै प्रभावित पार्दछ । त्यसैले, शरीरमा यु’रिक ए’सिडको मात्रा उच्च भएमा केक, पेस्ट्री, कुकिज जस्ता स्याचुरेटेड तथा ट्रान्स फ्याटयुक्त खाद्य पदार्थ खानबाट बच्नु पर्छ । त्यस्तै, म’दिराको सेवन गर्नबाट पनि बच्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा डब्बामा राखिएको खानेकुराले पनि यु’रिक ए’सिडको समस्यालाइ प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले, यस्ता खानेकुरालाई वर्जित गरेर पनि यो यु’रिक ए’सिडको समस्या जटिल हुनबाट बच्न सकिन्छ । यसबाहेक, माछा तथा मासुको सेवन नगरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किनकी रेड मिट तथा सारडिनेस, म्याकिरिल नामक माछामा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । र, यसको हल्कामात्र सेवनले पनि यु’रिक ए’सिड बढ्न सक्छ ।
प्लास्टिकको पन्यूँ चलाउनु नै हुदैन